Ny lavaka mainty nolalaovan'i NASA dia tena mampatahotra: Martin Vrijland
Ny lavaka mainty nolalaovan'ny NASA dia tena plasmida misy ranona
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 3 Novambra 2019	• 3 Comments
Ato ho ato tsy ho ela izay no namoaka boky dia, hiresaka momba an'izao rehetra izao aho, araka ny fiheverantsika azy. Anisan'ny zava-dehibe ny fizotry ny 'lavaka mainty'. Vao haingana i NASA dia nanolotra "saripika" lavaka mainty. Amin'ity horonan-tsary eto ambany ity dia hazavaina aminao ny hoe mety ny plasmidan'ny ranon-dra ity lavaka mainty ity. Ilaina ny mijery ilay horonantsary sy ireo horonan-tsarimihetsika hafa ihany koa amin'ny fantsona.The Thunderbolts Project'to view. Misimisy kokoa momba ny boky nosoratako ity aloha lahatsoratra. Tsy ho ela aho dia hanolotra ny datin'ny fandefasana marina.
Raha mihevitra fa misy lalàna voajanahary sasany mihatra amin'ny tontolo araka ny fahitanay azy, ilaina ny mandalina ireo teoria an'i Immanuel Velikovsky. Ny Thunderbolts Project nataon'ireo mpahay siansa David Talbott sy Wal Thornill, dia nanazava bebe kokoa ireo teôlikan'i Velikosvky ary noho io fanazavana io dia avy amin'ny fanazavana mazava momba ny niandohan'ny planeta, ny fananganana, ny hafanana ary ny rivotra iainana amin'ny planeta. Izany dia satria noheverin'izy ireo fa ao anatin'izao tontolo izao hita maso tsy vitan'ny gravity ihany, fa koa ny fiampangana herinaratra. Raha tsorina dia tokony arakaraka elektrika ny planeta. Raha mifanakaiky izy ireo dia matetika no mitraka ny fandefasana, mba hahafahan'ny fambolena plasma.
Ao amin'ny maoderina teorika amin'izao tontolo izao, ny lavaka mainty dia miorina amin'ny teoria Einstein momba ny fahalalahan'ny gravity, tsy misy fijerena an'izao rehetra izao (araka ny fahitanay azy) dia arakaraka amin'ny alikaola koa. Ao amin'ny maodely Albert Einstein, noforonina ny hevitra momba ny 'black hole'. Ny zavatra hafahafa dia ny hoe ny lavaka mainty ao anatin'io teoria io dia mavesatra ka mavesatra ny hazavana sy ny hazavana rehetra. Ny famaritana dia tsy miverina avy amin'ny lavaka mainty ny hazavana ka tsy azo jerena. Ny siantifika anefa dia nanambara fa mbola afaka mahita ny jiro manodidina ny lavaka mainty toy izany izy ireo ary nasehon'ny NASA tao amin'ny 2019 sary voalohany amin'ny alàlan'ny lavaka mainty ny NASA.
Ny teoria momba ny fisian'ny lavaka mainty dia ny fanangonan-tsonia ary ny siansa dia maniry mafy hihazona ny hypotheses azy, satria amin'ny maha-ampahany amin'ny rojo iray izay mifototra amin'ny teoria Einstein latsaka, teorina iray manontolo manomboka mihena.
Na izany aza, ny lavaka mainty dia mety tsy misy. Wal Thornhill dia manazava ao amin'ny fanolorana YouTube eto ambany fa ny sary nalain'ny NASA no mety ho arak'asa plasmaid. Plasmaid plasmaid iray ao afovoan'ny kianja arahin'ny herinaratra. Ny fitsapana amin'ny laboratoara dia mampiseho ny sary mitovy amin'ilay novoasan'ny NASA toy ny sarin'ny lavaka mainty.
Sary iray hafa naseho ny NASA tamin'ny Oktobra 2019 dia fanehoana ny sary simika solosaina izany sary izany ary noho izany tsy sary marina, fa sary.
Ny lavaka mainty dia hahasarika sy hanintona ny zava-drehetra ary araka ny fahitan'ny sasany azy ny haben'ny avotra hafa. Ireo dia teoria be dia be tokoa, satria ny fanontaniana hoe: aiza ho aiza daholo izay resaka rehetra?
Fantatsika izao (avy amin'ny dingana roa fanandramana) ny zava-drehetra dia tsy mitaky afa-tsy amin'ny fomba fijery ary tsy misy afa-tsy izao tontolo izao noho ny fahatsapana; fomba fijery avy amin'ny 'endrika fahatsiarovan-tena'. Amin'ny lavaka mainty dia tsy hojerena tampoka intsony ny raharaha, izay azo ampitahaina amin'ny pikantsary maty eo amin'ny efijery. Ny lalàna voajanahary sasany dia mihatra ao anatin'ilay simulation, na izany aza, ary ny vesatra mandeha amin'ny herinaratra ao amin'izao tontolo izao dia antony tsy isaon'i Einstein. Ho fanomanana ny boky dia ilaina ny manadihady mialoha izany.
Ny tebitebin'ny tany dia tsy misy dikany ny hametrahana ireo mpandinika malaza ao amin'ny zoron-tsambo
Izao tontolo izao dia simulation: ny fivavahana rehetra, ny rafi-pinoana rehetra dia fitaka
Izao tontolo izao dia fihenam-bidy ary ny fiteny hebreo dia misy ny code for geometrie tena izy
Ny tanjon'ny NASA dia ny hampivelatra an'izao tontolo izao
"Ny zava-misy araka ny fahitanay azy" boky Martin Vrijland dia azo alaina izao
Tags: David Talbott, elektrika, Featured, nahazo, lavaka, Immanuel Velikovsky, NASA, plasmoïde, Thunderbolts tetikasa, izao rehetra izao, Wal Thornill, mainty, mainty
Riffian nanoratra hoe:
3 Novambra 2019 ao amin'ny 17: 58
Tsy hifantoka amin'ny jamba aho amin'izay rehetra navoakan'ny NASA, efa voaporofo imbetsaka izy ireo taloha fa manodin-dry zareo ny sary sy ny horonan-tsary. Ary raha ny momba an'i einstein dia azon'i Tesla tsara kokoa ny fahitana azy
3 Novambra 2019 ao amin'ny 22: 27
Eny tokoa, tsy maintsy mizaha ny zava-drehetra amin'ny Nasa ianao ary mizaha indroa. Nisy tale izay toa an-dry Billy Wilder sy Stanley Kubrick izay nandainga teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny fanovana sary sy fitaka. Saingy tsy afaka milaza na inona na inona momba izany ianao.
4 Novambra 2019 ao amin'ny 02: 34
Ny fiangonan'ny Tesla sy ny antsoina hoe Hutchinson dia efa nanambara fa ara-batana ny fiangonantsika akaiky ary noho izany dia eo amin'ny sehatry angovo. Angovo zero dia mahafinaritra ny milalao.
« Ny famonoana indroa an'i Gina sy Marinus ao amin'ny sinema Pathé Groningen
Ireo andrim-panjakana tanora dia mampitabataba ny herisetra satria ny 'fikolokoloana' dia tena fanararaotana tokoa? »
Total visits: 13.823.644
"Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl
Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman)
Ny dingana voalohany dia ny fametrahana marika, ny dingana faharoa dia fivoahana: ny bokotra fanaovana vaksiny
Ahoana no ahafahanao manery ny governemanta hiova nefa tsy miraharaha ireo vahoaka?
Zandi Eyes op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
Martin Vrijland op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
Mifandraisa anjara amin'ny 1.682 hafa